Global Voices teny Malagasy · 7 Jona 2019
07 Jona 2019
Tantara tamin'ny 07 Jona 2019
Hijery an'i Haquira anaty sarintany lehibe kokoa. Toejavatra iray mahazatra loatra manerana an'i Però izy ity. Mifindra monina mamonjy ireo tanandehibe ireo mponina any ambanivohitra mba hitady fanabeazana sy asa tsaratsara kokoa. Raha ny momba ireo mponina avy ao amin'ny Distrikan'i Haquira ao Apurimac, Però, ny ady mitampiadiana ao anatiny...
Vaovaon'ny Sisintany ao Karen
Hijery ny Vaovaon'ny Sisintany ao Karen anaty sarintany lehibe kokoa. Miarina amim-pitandremana fatratra avy amin'ireo taompolo maro nisian'ny ady an-trano ny fanjakàna Karen, taorian'ny fampitsaharana fifampitifirana nifaovan'ny governemanta birmàna sy ny Karen National Union (Firaisam-pirenen'i Karen). Fanampin'ny fanarahamaso ataony amin'ny toedraharahan'ny zon'olombelona tena manahirana manaraka ny sisintany iraisan'i Birmania sy...
Hijery an'i Tukuni Yadua anaty sarintany lehibe kokoa Nandritra ny efapolo taona farany, nifofotra tamin'ny ezaka nataony hiarovana ny Igoanà misy sanga, biby tandindonim-paharinganana, ireo mponina ao anatin'ny vondrom-piarahamonina Denimanu ao amin'ilay nosy mitoka-monina Yadua ao Fiji. Ny tsindry avy ety ivelany sy ny fiovaovàn'ny toetrandro no loza mitatao ho...
Tantaran-tsakafo avy any Naplozy (Palestina)
hijery an'i Naplozy anaty sarintany lehibe kokoa Ao afovoan'ilay Tanana Fahagola Naplozy ao Palestina, nanokatra ny varavarany tamin'ny ririnina 2011 ny ivontoerana iray natokana ho an'ny vehivavy, antsoina hoe Bait al Karama, teraka avy amin'ny fiarahamiasa tokana teo amin'i Fatima Kadoumy, solontena ao an-toerana avy amin'ny fiarahamientam-behivavy mpanao asa soa...
Miantso ny fametraham-pialàn'ny minisitry ny fitsarana vaovao ry zareo Tseky tao anatin'ny fanamby nasionaly ho an'ny Praiminisitra Andrej Babiš
Eoropa Afovoany & Atsinanana07 Jona 2019
Nilaza ireo mpanao hetsi-panoherana fa mikasa ny hitsabaka amin'ny raharaha fanenjehana azy i Babiš. Mitaky ny fialan'i Benešová izy ireo sy ny fepetra vaovao ho fiarovana ny fahaleovantenan'ny fitsarana ihany koa.
Alemaina: Trangana fanakanana kaonty Twitter voalohany tao an-toerana
Alemaina07 Jona 2019
Tamin'ny volana Ôktôbra 2012, nanambara ny Twitter fa hanakana ny kaontin'ny vondrona neo-Nazi any Alemaina izy, izay vondrona nosakanan'ny governemanta alemà ny asany. Nampiseho ny nampiasan'ny Twitter voalohany ny politika fanaovan-dalàna izay miaro ny fanehoan-kevitra an-tserasera amin'ny ankapobeny, ankoatra ny tranga izay hidiran'ny governemanta ilay tranga.
Afrika Mainty07 Jona 2019
Mandoto ny lazan'i Japana amin'ny fihazana trozona i Neo Zealandy, hoy ny haino aman-jerim-panjakana Japoney
Japana07 Jona 2019
Miha-mafana ao amin'ny andrim-panjakana Japoney ny fanoheran'i Neo Zealandy ny fihazana trozona ao amin'ny Oseana Atsimo, ary maneho ny tsy fankasitrahany ao amin'ny aterineto manoloana ny valintenin'ny fitondrana ireo vahoaka japoney izay manaraka akaiky ny raharaha mahakasika izany.
Bilaogera Kiswahili: Atao inona fifidianana raha efa fantatra ela mialoha sahady izay ho lany? sy vaovao hafa…
Manohy manoratra momba ny fifidianana filoham-pirenena sy parlemantera amin'ny faran'ny volana ireo bilaogera Tanzaniana Kiswahili. Mwandani nahita taratasy misokatra misy toro-hevitra nalefa any amin'ny "filoha manaraka", Jakaya Kikwete.